'बहस र तर्क होइन विकास गर्छु' : प्रधानमन्त्री
‘बहस र तर्क होइन विकास गर्छु’ : प्रधानमन्त्री
२२ पुष २०७५, आईतवार १३:४८
काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची नभएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो अवधिमा आफूले अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको बताउँदै सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची छैन । र, गर्नुपनि छैन । गर्नु छ त देशको विकास ।’
‘सरकार के गर्दै छ पत्तो भएन । के गर्दैछ ? भनेर प्रश्न आउँछ अनि जवाफ दिन्छु । अनि प्रधानमन्त्री किन बोलेको ? भनेर प्रश्न आउँछ ।’ उनले भने, ‘बोल्न नहुने रहेछ भनेर चुप रहन्छु । फेरी प्रश्न उठाउँछ- खै जवाफ दिएको ? केही गर्न खोजिन्छ, सोधिन्छ- किन गरिँदैन ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई खुशी बनाउनेभन्दा सरकारको अरु कुनै स्वार्थ नरहेको उल्लेख गरे । उनले जनताले दिएको बहुमतको सरकारले नै विकास गर्ने ठोकुवा गर्दै भने, ‘हामीसँग गणतन्त्र छ । संघीयता छ । जनताले बहुमत दिएका छन् । यस्तोमा पनि विकास नगरे कहिले गर्ने ?’
Tagsकेपी शर्मा ओली विकास सरकार